कोरियामा पनि को रोना खोप अभियान सञ्चालन, कहिलेदेखि पाउँछन् नेपालीले लगाउन ! « Bagmati Online
कोरियामा पनि को रोना खोप अभियान सञ्चालन, कहिलेदेखि पाउँछन् नेपालीले लगाउन !
सउल, १४ फागुन । दक्षिण कोरियाले देशव्यापीरुपमा कोरो ना वि रुद्धको खोप अभियान सुरुआत गरेको छ । थेगु शहरको एक अस्पतालमा रहेको ६० वर्षीय जोडी चिकित्सकबाट खोप अभियान शुरु भएको बताइएको छ । अस्ट्राजेनेका कम्पनीद्वारा निर्माण गरिएको सो खोप पहिलो चरणमा ६५ वर्षभन्दामुनिका कोरियाली स्वास्थ्यकर्मी तथा नर्सिङहोमका कर्मचारीलाई लगाइने यहाँको स्वास्थ विभागले जनाएको छ ।
यससँगै यहाँ रहेका नेपालीमा खुशीको सञ्चार भएको छ । कोरियाले यसअघि नै यहाँ रहेका विदेशीलाई पनि कोरो नाविरुद्धको खोप निःशुल्क प्रदान गर्ने बताइसकेको छ । हरेक वैधानिक तथा अवैधानिक विदेशीले पनि सो खोप प्राप्त गर्नेछन् ।